U-Britney Spears uqale ekuqaleni esiteji, ikakhulukazi ecabangela ukuthi wayengenabo abanikazi abathandekayo nezihlobo ezinamakhono emibuthanweni yomculo. Yakhula ngokoqobo phambi kwezwe lonke. Wonke ama-albhamu akhe ayethandwa kakhulu futhi athengiswa kakhulu ezincwadini ezinkulu. Amafomu kuwo wonke amazwe amlingisa umculi omncane, ambuka ekukhuleni kwakhe, ephenduka ngaphandle futhi eziphatha esiteji. Kodwa impilo yomuntu siqu womculi omuhle futhi onethalente, ogama lakhe lisetshenziselwa ama-studio kanye namakhonsathi, akude ne-cloudless. Umcwaningi ukhuluma njalo ngesinyathelo ngasinye sokuphila kwakhe: umculi uhlangana naye, bangaki abantwana uBritney Spears, ukuthi kungani enquma izinwele zakhe nezinye izindaba zomculi. I-princess yase-pop isibe ngumama isikhathi eside, yasinda isahlukaniso, kepha akayeki ukukholelwa othandweni nokuphupha ngendodakazi yakhe.
Abazali Spears - izakhamizi zaseMelika ezivamile, ezingahlotshaniswa nomculo noma kubonise ibhizinisi. Kusukela ebuntwaneni, abazali bakaBrithney Spears banikezwe i-gymnastics yobuciko. Ingane yayiplastiki kakhulu, ubuciko futhi buhle kakhulu. UBritney omncane wahlanganyela kuzo zonke izimpikiswano zobuhle, futhi wahlabelela esontweni lesonto. Ezweni lamakhansela aqhakazile kanye namakhamera wethelevishini, wafika ngokuhlanganyela emncintiswaneni, bese esebenza esiteshini "Disney". Ngokushesha lo mdlalo wavalwa futhi intombazane yabuyela esikoleni sayo. Kwaphela isikhathi esahlabelela eqenjini lendawo, kepha wayehlale ephupha ngento engaphezulu. Enquma ukwenza okuthile, intombazane yabhala i-albhamu yedemo, eyamsiza ukuba asayine isivumelwano nomkhiqizi.
Izindaba zezinhliziyo zomculi osemusha, omuhle futhi othandwayo zazihlala zithandeka emphakathini. Eminyakeni engaphezu kwengu-4 intombazane ihlangana noJustin Timberlake, ubungane obambelelwe kusukela esebenza "eMickey Mouse Club".
UFred Durst wathi babenothando lobuhlobo no Spears. Lapho eneminyaka engu-22 ubudala, uBritney waba ngumakoti okokuqala, umlingani wakhe wayengumngani wakhe wobuntwana. Umshado wenziwa eLas Vegas futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa kwathiwa awuvumelekile.
Kevin, Britney kanye nezingane
Ngomngane wakhe ozayo oshade naye, i-princess yase-pop yahlangana ngezinyanga ezintathu. Ibutho labalandeli bafunda umshini ukuze bathole izimpendulo zemibuzo mayelana nomculi wabo ozithandayo:
Ubani okhethwe yiBrithney?
Wayephi umshado wendodakazi yenkosikazi?
Bangaki abantwana uBritney Spears anakho?
Ukulethwa kwaba kanjani?
Ingabe i-Spears izobuyela umculo?
Umshado wenziwa emzini womngane wabashadile, futhi ngemva komshado lo mculi wamemezela ukuthi uzimisele ukuthatha iholidi emsebenzini womculo. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, uBretney Spears umemezele ukuthi ukhulelwe. Ingane yazalwa ngoSepthemba 14, 2005.
Ukuzalwa kwakhe yindaba yangempela yothando-yothando. UBrithisi wadukisa abathwebuli bezithombe, wahlela ukuphunyuka futhi wabeka phansi yonke indawo emtholampilo nabaqaphi abakhulu, amaphoyisa nabanye abasebenzi. Konke lokhu uKevin ubambe isandla somkakhe wadlala noma yikuphi owesifazane okhulelwe. Ingane yazalwa ngosizo lwesigaba se-cearean, e-Britney.
Ngokushesha, abezindaba baqala ukuvela ngamahemuhemu okukhulelwa okwesibili, u-Britney Spears. Ingane yazalwa ngoSepthemba, ngonyaka owodwa ngemuva komfowabo, emtholampilo lapho uRocco, indodana kaMadonna , ezalwa khona. Ekubelethweni kwesibili intombazane yayifisa ukwenza isigaba se-cearean.
UBrithney uthi ukuzalwa kwezingane kwavula imizwa emisha kuye, okumele kubonakale emsebenzini wakhe.
Ngokuzalwa kwezingane Britney uye wathola ukuthandwa emhlabeni wonke futhi wathola inzuzo enkulu. Konke okuphathelene nokuphila kwakhe komuntu siqu, kubangele isithakazelo esikhulu emphakathini. Ngokuvamile lokhu bekusebenza njengohlelo lwe-PR kumikhankaso yakhe. Kodwa izingane zomculi zazihlala zingenakuvikelwa, wazama ukuzivikela kubadwebi bezithombe. Akuzange ngokushesha abezindaba bakwazi ukuthola ukuthi igama labantwana liyiBritney Spears.
Indodana endala nguSean Preston Spears Federline. U-Britney walithanda leli gama kusukela ebuntwaneni. Umama wanika u-Little Sean ice cream kancane ngaphambi kokulala, ngemuva kwalokho walala kangcono. Umfana uphupha lokuba ngumqeqeshi wezobuchwepheshe esikhathini esizayo. Ingane inomusa kakhulu, inomusa, inakekela futhi inothando. Kodwa ukhululekile futhi ubuhlungu kunomfowabo omncane.
Indodana yesibili kaBretney Spears nguJayden James Spears Federline. Ngemuva kokuqinisekiswa okusemthethweni kwegama lomntanakho, igama elithi Jayden laba yinto ethandwa kakhulu e-United States. Indodana encane ifana no-Britney Spears. Ingane yaziwa ngokuthi "indodana encane" yamama. Unomdlandla futhi unomsindo kunaseSean.
Abantu abanomona baxoxa ngomshado nomndeni kaBrithney Spears. Abaningi babengakholelwa ukuthi ubuhlobo babo buhlala isikhathi eside kangakanani. Kwakubonakala kunengqondo kakhulu ukushada: uyindodakazi yenkosikazi yomdlalo we-pop, i-megapopular, sexy ne-talented, futhi ingumdanso ongaziwa.
UBretney wavikela umshado wakhe ngokunyundela futhi waze wanqoba inkantolo nokuxolisa komphakathi ngezincwadi ezazama ukugijima ngaphambi komuzi.
Kodwa nokho isahlukaniso sasingapheli, icala, elibuthe iminyaka yonke yomshado phakathi kokubili komshado, kwakuzoholela enkantolo.
I-Western press yabhala ukuthi ubudlelwane emkhayeni osemusha awusebenzi. Umyeni uvame ukubonwa emaqenjini ahlukahlukene nabangane namantombazane kunaseBretney nezingane. I-Spears isikhathi eside ngaphambi kokuba isehlukaniso seyeke ukubonakala esidlangalaleni ngesineke sokubambisana. Wayengekho "othandweni" lapho umkakhe ayefuna ukusekela ubuhlobo babo, enganaki umsebenzi wakhe ensimini yomculo.
UBrney uzofaka isicelo sokuqhafaza, futhi uKevin wamvuma ngemuva kokushicilelwa kwe-albhamu yakhe. Iqiniso liwukuthi kulo mcimbi, uBretney wamhlonipha esidlangalaleni, ebiza i-rapper ehle kakhulu. Akazange ahloniphe idatha yakhe yomculo futhi akholelwa ukuthi "lo dancer akahlosiwe ukuba abe umqashi." UKevin wayethukuthele kakhulu kangangokuthi wazwakalisa ngokuzwakalayo ekubonisweni.
Ngokushesha lo mbhangqwana waqedwa.
Umama kaBritney ngemuva kokuhlukanisa
Ngesikhathi sesahlukaniso, uBretney wacela ukuba anikezwe izingane kuye, enelungelo lokuvakashela uyise. Isinqumo senkantolo sithathwe esiqondisweni sakhe, kodwa asizange sihlale isikhathi eside.
UBrney wabhekana nokuphazamiseka kwemizwa futhi waphathwa emitholampilo. Ubekwa icala lokusebenzisa izidakamizwa, ukuhlanganyela engozini nokushayela imoto ngaphandle kwamalungelo. Umculi we-pop wayesongelwa ngejele.
Insimbi eyayizungezile yayingabaza ikhono lakhe lokunakekela izingane. Lowo owayengumlindi wesigameko uthe umsolwa wabonakala engqunu phambi kwabafana bakhe futhi akazange abakhathalele kahle nokuphepha kwabo.
Umculi wayephindwe kaningi emtholampilo futhi waze waqaphela ukuthi wayengenakuthola, umgcini wakhe wamiswa njengomzali. Umyeni wangaphambili akazange nje athathe abafana, wavinjelwa imihlangano kaBrithani namadoda.
Manje izinto zingcono kakhulu uBritney, wakwazi ukubhekana nokucindezeleka, ukulutha kwezidakamizwa nokuphuza utshwala, abuyele emsebenzini futhi aphinde abuyele ilungelo lokunakekela abafana. Ngezikhathi ezithile emaphephandabeni kunolwazi mayelana nokuhleka kwephrincess pop, isoka lakhe elisha kanye nezingane zaseBrithney Spears bezijabule. Izithombe zomama ojabulayo namadodana akhe amabili amancane kakhulu amnandi futhi adala ukumomotheka. Kukholelwa ukuthi ndawonye ndawonye, futhi uBritney oqinile uzokwenza konke okulungile, futhi uma ekhubeka, angalungisa konke!
I-Santa Dimopoulos: umzimba ophelele uyizwi elihle
Umculi uSasha: biography, umndeni kanye nendlela yokuphumelela
Abantu eyingozi kakhulu uhlu jikelele. Ubani igama lale ndoda eyingozi kakhulu?
Izinhlobo ukulele: umehluko nomlando ithuluzi
Mystic Green Island (Rostov-on-Don): ezokungcebeleka, ukuzilibazisa izikhungo
Amabhodi we-bulletin njengesizo ekuthengiseni izimoto nezingxenye zomzimba
Reserve Tigireksky: Protected izindawo Altai Territory